Rasmi: Kahaani 2 Sabtigiisa 1-aad Lacagaha Uu Keenay Iyo Dear Zindagi Sabtigiisa 2-aad Ganacsiga Uu Sameeyay - Hablaha Media Network
Rasmi: Kahaani 2 Sabtigiisa 1-aad Lacagaha Uu Keenay Iyo Dear Zindagi Sabtigiisa 2-aad Ganacsiga Uu Sameeyay
HMN:- Filimka Kahaani 2 oo ay hogaamiyaal ka yihiin Vidya Balan iyo Arjun Rampal ayaa sameeyay 30% sare u kac ah maalintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay marka lala bar dhigo ganacsiga uu maalintiisii kowaad sameeyay.
Kahaani 2 ganacsiga uu sabtigiisa kowaad sameeyay ayaa ka dhigan in filimkaan weli rajo fiican laga qabo inkastoo maalintiisa kowaad ganacsi gaabis ah sameeyay.
Kahaani 2 mudo labo maalmood ah wuxuu gudaha Hindiya kasoo xareeyay 9.75 Crore (Trade Figure) waxaana laga rabaa maalintiisa sedexaad (Axad) inuu markale sare u kac xoogan sameeyo.
Kahaani 2 ilaa haatan wuxuu ku wanaagsan Mumbai, West Bengal iyo Mysore laakiin waa inuu Hindiya oo dhan ganacsi wacan ka sameeyo si uu mudo dheer tiyaatarada baaqi ugu sii ahaado.
Fadlan hoos kaga bogo Kahaani 2 mudo labo maalmood ah ganacsiga uu sameeyay:
Jimco – 4.25 Crore
Sabt – 5.50 Crore
Wadarta Guud – 9.75 Crore (Trade Figure)
Dhinaca kale filimka Dear Zindagi ayaa ganacsi fiican sameeyay sabtigiisa labaad wuxuuna sameeyay sare u kac 55% ah marka lala bar bar dhigo Jimcadiisa labad ganacsiga uu sameeyay filimkaan.
Dear Zindagi sabtigiisa labaad wuxuu keenay 3.50 Crore haatana mudo 9-maalmood ah wuxuu gudaha Hindiya kasoo xareeyay 52.50 Crore (Trade Figure).
Dear Zindagi ganacsiga uu sameeyay mudo 9-maalmood ah hoos kaga bogo:
Todobaadka kowaad – 46.75 Crore
Maalinta 8-aad: 2.25 Crore
Maalinta 9-aad: 3.50 Crore
Wadarta Guud – 52.50 Crore (Trade Figure)
Dear Zindagi ganacsiga uu sameeyay ilaa haatan waa mid aad u wanaagsan marka loo firiyo qarashaadka filimkaan ku baxay oo 35 Crore ah sidoo kalena kooxda cajaladaha qeybiyaan waxay ku iibsadeen 31 Crore taasi oo ka dhigan inuu Hit dhameestiran noqon doono marka uu 62 Crore gaaro.
Waana darajada uu Dear Zindagi gaari doono madaama filimkaan cimri ahaantiisa 65 Crore ilaa 70 Crore inta u dhaxeyso uusan dhaafi doonin.